Ama-smartwatches amahle kakhulu ongawanikeza ngoKhisimusi | Izindaba zamagajethi
Ama-smartwatches amahle kakhulu ongawanikeza ngoKhisimusi
U-Ignacio Sala | | Gadgets, SmartWatch
UKhisimusi ususondele. Uma singasebenzisi ngokunikezwayo okwehlukile kwe-Black Friday eyedlule futhi asiqhubeki ngaphandle kokucacisa ukuthi yini esingayithengela umlingani wethu, umama, ubaba, izingane noma abangane, ku-Actualidad Gadet senza okungafani uhlu lwezinto ezinhle ongazinikeza ngoKhisimusi.
Akusikho isidingo izibani ezihlakaniphile, amasongo wokulinganisa, izipikha ezihlakaniphile o i-headphones ukunikezela ungabonisana nemihlahlandlela esiyishicilele ngaphambilini. Manje sekuyithuba le- smartwatches, enye yamadivayisi abelokhu ethola imakethe enkulu eminyakeni yamuva kanye namasongo wokulinganisa.
1 I-Smartwatch noma isongo lokulinganisa?
2 I-Samsung Galaxy Watch Iyasebenza
3 I-Samsung Galaxy Watch Active 2
4 I-Samsung Galaxy Watch
5 I-Huawei Bukela i-GT 2
6 I-Fossil Sport Smartwatch
7 Uchungechunge lwe-Apple 3/4/5
I-Smartwatch noma isongo lokulinganisa?
Ngaphambi kokuthatha isinqumo nge-smartwatch kufanele sicacise uyini umehluko phakathi kwe-smartwatch nesongo lokulinganisa. Cishe, umehluko omkhulu, ngaphezu kwentengo, utholakala ekusebenzeni abasinikeza kona.
Ngenkathi ama-smartwatches asinikeza ngosayizi omkhulu wesikrini nokuthi kungenzeka yini phendula izingcingo nemiyalezo, amasongo wokulinganisa agxila ekulinganiseni umsebenzi wethu womzimba, umsebenzi esingawuthola nakumawatchwatches.
Omunye umehluko phakathi kwama-smartwatches namasongo wokulinganisa utholakala ku- impilo yebhethri. Ngenkathi ama-smartwatches anempilo yebhethri ephezulu yosuku olulodwa noma ezimbili, ukulinganisa amabhande esihlakala kungadonsa kuze kube amasonto amabili.
I-Samsung Galaxy Watch Iyasebenza
El I-Samsung Galaxy Watch Active Kuyisizukulwane sokuqala sohlu olusha lwama-smartwatches adalelwe ukufinyelela inani elikhulu labantu. Lesi sizukulwane sokuqala sisinikeza i- Isikrini esingu-1,1-intshi esinokulungiswa okungu-360 × 360 nebhethri elingu-230 mAh. Inokuvikelwa kwe-IP68 kumanzi nothuli nokumelana kuze kufike ku-5 ATM.
Ngokuya ngokusebenza, uma sikubhangqe ne-Samsung smartphone, sizokwazi ukuthola okuningi kukho, kepha akuyona imfuneko ebalulekile ukuthi sikwazi ukujabulela zonke izinzuzo esisinikeza zona uma kuziwa Linganisa umsebenzi wethu womzimba, ulinganise isilinganiso senhliziyo yethu futhi ubheke imijikelezo yethu yokulala.
Intengo ye- I-Samsung Galaxy Watch Active kuvela I-199 euro.
I-Samsung Galaxy Watch Active 2
Isizukulwane sesibili sebanga le-Samsung's Watch Active lisinikeza cishe izici ezifanayo nezesizukulwane sokuqala kepha ingeza imisebenzi emibili emisha nehehayo efana nomtshina wokuwa kanye ne-electrocardiogram.
Ngiyabonga umtshina wokuwa, i-accelerometer yedivayisi izitholela yona uma siwe ngokuzumayo futhi isimema ukuthi sazise izimo eziphuthumayo. Uma singaphenduli kuleso sicelo, kuzokwenza ucingo lwazile indawo yethu.
Umsebenzi electrocardiogram kusivumela ukuthi sithole okungajwayelekile enhliziyweni yethu okungakatholakali phambilini. I-Apple Watch, i-smartwatch sokuqala ukufaka lesi sici, isindise izimpilo eziningi ngenxa yalokhu kusebenza.
I-Samsung Watch Active 2 inesikrini esingu-1,4-intshi (44 mm) / 1,2-inch (40 mm), iphethwe yiTizen (uhlelo lokusebenza lwe-Samsung) kanye neprosesa ye-Exynos 910. Isinikeza u-4 GB wesitoreji, i-bluetooth 5.0 futhi itholakala futhi kunguqulo ye-LTE.
Intengo ye- I-Samsung Galaxy Watch Active 2 44mm ngama-euro angama-295. Uma singafuni ukusebenzisa imali eningi, singathola isizukulwane sokuqala, ISamsung Galaxy Watch Active intengo yayo ingama-euro angama-195.
I-Samsung Galaxy Watch
Ngaphezu kwemodeli esebenzayo, i-Samsung iphinde isinikeze i- I-Samsung Galaxy Watch, imodeli yebanga le-premium. Le modeli ingumlandeli wemvelo ebangeni leGear elangena emakethe eminyakeni embalwa edlule futhi laphumelela kakhulu emakethe. Itholakala ngosayizi ababili: 42 no-46 mm no Yenziwe ngezinto zokwenziwa kwe-premium.
Njengawo wonke amamodeli anikezwa i-Samsung njengamanje emakethe ye-smartwatch, iphethwe yiTizen. Imodeli engu-46mm inesikrini esingu-1,3-intshi kanti imodeli engu-42mm inesikrini esingu-1,2-inch. Zombili izikrini Banesinqumo se-360 × 360.
Ibhethri lemodeli engu-46mm lingu-472mAh, 270mAh ngemodeli engu-42mm. Le modeli ingenye yezimbalwa ezinakho I-chip ye-NFC ukuze ikwazi ukukhokha ngesihlakala sethu. Ine-chip ye-GPS yokuqapha ukusebenza kwethu komzimba ngaphandle.
Intengo ye- I-Samsung Galaxy Watch kuvela I-269 euro, yenguqulo engu-46 mm.
I-Huawei Bukela i-GT 2
Uma ufuna i-smartwatch enkulu, i- I-Huawei Bukela i-GT 2 kube nguwe omfunayo. IHuawei's Watch GT 2 iyi imodeli yakamuva eyethulwe yinkampani yase-Asia futhi yisizukulwane sesibili seWatch GT, isizukulwane sokuqala esathengisa amayunithi angaphezu kwezigidi eziyi-10.
Le modeli ine- Isikrini se-AMOLED esingu-1,39-intshi, iphethwe yiLiteOS (uhlelo olusebenzayo lukaHuawei) kanye neprosesa yeKirin A1 (nayo yaklanywa yenziwa yiHuawei). Inesitoreji sezingoma ezingama-500 nokuzimela okungafinyelela kumaviki ama-2 (kunciphisa yonke imisebenzi yayo kuze kube sezingeni eliphezulu).
Ihambisana nanoma iyiphi i-smartphone ene-iOS (idinga i-iOS 9 noma kamuva) ne-Android (idinga i-Android 4.4 noma kamuva) nge Uhlelo lokusebenza lweHuawei Health. Itholakala kumamodeli amabili wamamilimitha angama-42 no-46, ngakho-ke iyavumelana nobukhulu besihlakala.
Ngokuya ngokusebenza, okuyikho okubaluleke kakhulu kithi, hhayi thina kuphela qopha ukushaya kwenhliziyo yethu futhi ubheke ukulala kwethu, kodwa futhi ilinganisa noma yiluphi uhlobo lokuzivocavoca esilwenza ngokuzenzekelayo, ngaphandle nangaphandle kokuvivinya umzimba.
El Ayikho imikhiqizo etholakele. iyatholakala ku-Amazon ye I-239 euro.
I-Fossil Sport Smartwatch
Umenzi wamawashi uFossil ungomunye wabadala emkhakheni we-smartwatch futhi ubufakazi obuhle kakhulu balokhu yi I-Fossil Sport Smartwatch. Le modeli, ngokungafani namamodeli wakudala wale nkampani, isinikeza ngomklamo wezemidlalo, utholakala ngosayizi ababili be- 41 no-43 mm nangemibala emithathu: okuluhlaza okwesibhakabhaka, omnyama nophinki (itholakala kuphela kunguqulo engu-41 mm).
Ngaphakathi kweFossil Sport sithola i-Android Wear, Iphethwe yi-Snapdragon Wear 3100, ine-chip ye-NFC ukwenza izinkokhelo ngesihlakala sethu ngeGoogle Pay futhi sinezinzwa zokuqapha kokubili ukulala kwethu nomsebenzi wethu wezemidlalo nokushaya kwenhliziyo.
Imichilo yale modeli ingama-22 mm, ngakho-ke sinenqwaba yezinketho zokuyenza ngokwezifiso. Intengo ye- I-Fossil Sport kuvela Ama-euro angama-149 e-Amazon.
Uchungechunge lwe-Apple 3/4/5
Uma une-iPhone, i-smartwatch engcono onayo futhi ekuvumela ukuthi uwasebenzise ngokugcwele ama-iOS womabili yi-Apple Watch. Nge-Apple Watch awukwazi ukuphendula imiyalezo kuphela, kodwa futhi ungashaya futhi izingcingo.
I-Apple Watch Series 3 iyimodeli eshibhile esinayo. Umehluko nge-Series 4 no-5 utholakala ku usayizi wesikrini, esukela ku-38 iye ku-40 futhi isuka ku-42 iye ku-44 mm. Imichilo ehambisanayo iyahambisana kuzo zombili izinhlobo.
Zonke izinhlobo ze-Apple Watch ziyatholakala kunguqulo ye-LTE. Umehluko omkhulu esiwutholayo phakathi kochungechunge 4 nochungechunge 5 ngukuthi isibonisi sakamuva esihlala siboniswa. Kokubili kufaka umtshina wokuwa kanye nomsebenzi we-electrocardiogram ukuthola ukungahleleki enhliziyweni.
El I-Apple Watch Series 5 iyatholakala kunguqulo yayo engama-44 mm ye- Ama-euro angama-479 e-Amazon. I I-Apple Watch Series 3 iyatholakala nge- I-229 euro.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Gadgets » SmartWatch » Ama-smartwatches amahle kakhulu ongawanikeza ngoKhisimusi
Kwa-Apple akuzona ezamancoko ezinamakhophi we-iPod Classic yakho
Ikhompyutha yami ihamba kancane. Ngiyilungisa kanjani?